Tobanka Kun Ee Guri Ee Turkiga Uu Ka Dhisayo Muqdisho (Wareysi) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Tobanka Kun Ee Guri Ee Turkiga Uu Ka Dhisayo Muqdisho (Wareysi)
Tobanka Kun Ee Guri Ee Turkiga Uu Ka Dhisayo Muqdisho (Wareysi)
Wasiirka Howla-ha Guud iyo Dib-u-dhiska ee Xukuumadda Feder-aalka ah ee Soomaa-liya, Eng. Saalax Sheekh Cismaan ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Xaqiiqa Times uga warbixiyay wasaaradda iyo waxy-aalaha u qabsoomay tan iyo intii uu xilka la wareegay, dayactirka kaabeyaasha dhaqaale ee dalka, siyaasadda dowladda ee ku waja-han dadka danyarta ah ee deggen dhulkii dowladda, halka uu marayo qorshihii dowladda Turkiga ee tobanka kun ee guri ay uga dhisaysay magaa-ladda Muqdisho iyo dib-u dejinta dadka ku barakacay dalka gudihiisa iyo qaxootiga soo laabanaya.
Xaqiiqa: Mudane Wasiir, ugu horreyn, waxaad si kooban noogu sharraxdaa taariikh nololeedkaaga?
Wasiirka. Waxaan ku dhashay magaaladda Afgooye, waxaana dug-siga sare ka dhameeyay magaalada Marka. Kaddib waxaan wax-barasho u aaday wadd-anka Talyaaniga, halkaas oo aan ka dhameeyay jaamacad Injineeriya ah oo ka mid ah jaamaca-daha ugu wanaagsan Yurub. Kaddib dagaalkii sokeeye, waxaan billaa-bay in aan ka shaqeeyo arrimo bini’aadannimo.
Xaqiiqa: Maxaa u qab-soomay wasaaradda intii aad joogtay?
Wasiirka: Wasaaradda wax badan ayaa u qabsoomay tan iyo intii aan xilka la wareegnay. Dabcan dalka muddo aad u dheer ayuu burbur ku socday, mana dha-cayso in ay hal mar wax kasta ku dhammaadaan. Ugu horreyntii waxaan billownay in aan dii-waangelinno shirkadaha dhinaca dhismaha iyo qandaraasyada qaabbil-san, si aan u ogaanno shirkadaha wax dhisi kara iyo kuwa aan wax dhisi karin. Waxaan ka qayb-qaadannay kordhinta dhaqaalaha waddanka, lacag badan ayaana wasaaradda maaliyadda u shubnay. Waxaan helnay bal-lan-qaad ah in dhismaha wasaaradda la dhiso. Wakaaladdii hindisaha ayaan iyana dhisma-heedii dhagax dhignay, taas oo aan dhawaan howlgelin doonno.
Xaqiiqa: Kaabeyaas-hii dhaqaale ee dalka burbur xoog leh ayaa gaaray haddii ay tahay dekedihii, garoomadii diyaaradaha, beerihii iyo kaabeyaasha kaleba, maxaad ka qabateen?
Wasiirka: Runtii dow-laddu aad ayay xoogga u saartay sidii ay u dhisi lahayd jidadkii, garoomadii diyaaradaha, isbartiibooyinkii, deke-dihii iyo dhismeyaashii danta guud. Wax badan ayaa nooga qabsoomay, wax badanna waa noo dhiman yihiin.
Xaqiiqa: Waddooyinkii magaalada burbur xoog leh ayaa soo gaaray mana jirto wax dayactir ah oo lagu sameeyay marka laga reebo jidka Maka Al-Mukarrama oo dowladda Turkiga ay dayactirtay oo isaga laftiisana ay dowladdii iyo shacabkii isku dhib-ban yihiin isticmaalki-isa, ma halkaas ayaad uga harteen dayactirkii waddooyinka?
Wasiirka: Waan wadnaa qorshihii lagu dayac-tiri lahaa guud ahaan jidadka magaalada iyo xitaa kuwa isku xira Muqdisho iyo gobollada kaleba. Dhawaan wax-aan rajeynaynaa in laga raysan doono waddo xumida laga cabanayo.
Xaqiiqa: Dowladda Turkigu waxay horay u ballan-qaadday in ay toban kun oo guri ka dhisi doonto magaa-ladda Muqdisho, halkee ayuu qorshihii arrintaasi marayaa?
Wasiirka: Howshaas meel fiican ayay maray-saa, dhakhso ayayna u billaabanaysaa haddii uu Alle idmo. Booqasho dhawaan aan ku tegeyna waan iskula soo qaadnay sidii howshaas loo dar-dargelin lahaa. Waxaan sidoo kale soo gaarnay heshiis ah in la mata-aneeyo labada wasaarad ee labada dal.
Xaqiiqa: Waxaa jira xeryo dhowr ah oo dad soo barakacay ay ku nool yihiin, kuna yaalla magaalada Muqdisho gudaheeda, maxaad ugu talagasheen dadkaas?
Wasiirka: Dadkaas soo barakacay dib u dejintooda waa arrimaha ay wasaaraddu xoogga saarto sidii loo xallin lahaa. Xilli dhowna waxaan rajeynaynaa in aanay hal xero oo lagu barakacay ku oolli doon-in magaalada Muqdisho.
Xaqiiqa TimesXogaha Dahsoon iyo Xaqiiqooyinka………………….
Wargeysku wuxuu soo dhaweynayaa aragtidaada iyo qormooyinkaa-ga, haddii ay ku qotomaan talo iyo toosin.
Fadlan noogu soo dirxaqiiqadesk@gmail.com
Previous articleMADASHA WADA-TASHIGA: Taladii Ugu Horreysay ee Soomaalida Lagu Tijaabiyay
Next articleDaryanku Ma Derbigaa Mise Durugsi Dhuleed?